विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? के-के समान ल्याउन पाइन्छ ? - jagritikhabar.com
विदेशबाट नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ ? के-के समान ल्याउन पाइन्छ ?
के तपाईं विदेशबाट नेपाल फर्कदै हुनुहुन्छ या फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ ? वैदेशिक रोजगारीमा गएर होस् वा विदेशमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरु स्वदेश फर्किँदा आफन्त तथा साथीभाइका लागि भन्दै महँगो ब्रान्डको रक्सीसहित टीभी, मोबाइल फोन, ल्यापटप, सुनचाँदीका गहनालगायतका सामग्री बोकेर आउने गर्दछन् ।
अझ दसैँतिहार जस्ता ठूला चाडपर्व आएसँगै केहि न केहि समान घर लैजाने चाहना सबैको हुन्छ तर नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट के के समान नेपाल ल्याउँदा कति रकम भन्सार तिर्नुपर्छ ? के के मा भन्सार छुट हुन्छ भन्ने जानकारी नहुन सक्छ।
भन्सार लाग्ने / नलाग्ने सामान :